Shaandheeyaha wareega, sidoo kale loo yaqaan element filter, waa mid ka mid ah alaabada shaandhada inta badan la isticmaalo. Waxay ka samaysan tahay bir aan bir lahayn ama xariir madow. Taas ka dib, waxaa loo habayn karaa shaandhada geesaha laalaaban iyo shaandhada lakabka badan.
Shaandhee macluumaadka alaabta
Waxyaabaha: mesh silig, shabag bir ah, marada xariirta madow, mesh galvanized, iwm.
Farsamaynta farsamaynta: shaabadeynta mashiinka shaambada weyn.
Astaamaha: shaandhada wareegtadu waxay leedahay faa'iidooyinka aagga weyn ee waxtarka leh, isticmaalka habboon iyo kharash yar.
Kala-soocidda: waxay noqon kartaa hal-lakab ama lakabyo badan, ama ka samaysan bir aan lahayn ama xariir madow.
Codsiga: inta badan waxaa loo isticmaalaa sifeynta warshadaha caagga iyo caagga ah iyo baaritaanka hadhuudhka, saliidda iyo warshadaha dawooyinka.
Dhexroorka ugu sarreeya: 6000mm (6m)
Dhexroorka siliga ugu badan ee mesh silig farsamaynta: 4mm
dhexroorka siliga (mm)
1x30m miisaanka saafiga ah ee duntu (kg)
Walxaha shaandhaynta birta aan fiicnayn
304, 316, 316L birta tolka leh ee birta ah, mesh bir ah oo aan bir lahayn, dareemayn; qaab dhismeedka filtarka duuban waa hal-lakab ama lakabyo badan, iyo qalabka lagu xirayaa waa saxan aluminium, saxan bir ah, saxan naxaas ah, saxan galvanized, iwm.
1) Dhab ahaantii ma jiraan wax ka dhacaya;
2) Waxay si badbaado leh ugu shaqayn kartaa -270-400 ° C muddo dheer. Wax dhib ah ma laha heerkulka sare ama heerkulka hooseeya, alaabta birta ah ma soo daadin doonto walxaha waxyeellada leh, wax-qabadka maaddadu waa mid deggan, awoodda wasakheynta ayaa sarreeya, saxnaanta sifaynta waa sax;
3) Ma fududa in la dhaawaco, cadaadis yar oo lumay iyo meel sifaysan oo weyn;
4) Fudud in la nadiifiyo oo cimri dheer.
Filter Pleated, element filter sintered,filter disc iyo xubno filter kala duwan iyo mesh silig.Waxyaabaha waxaa ka mid ah ahama,duplex SS,Supper Duplex SS,monel,inconel,nickel,hastelloy iwm.
Petro-chemical, Polymer, Sifeynta Catalytic, sifaynta shidaalka, line-soo-saarka cadaadiska saliidda iyo jarida sifaynta saliidda iyo homogenization; Daaweynta gaaska; daaweynta biyaha, warshadaha dawooyinka, warshadaha cuntada, ilaalinta ololka warshadaha, iwm.
1. Soo-saarka OEM soo dhaweynta: Badeecada, Xidhmada...
2. Tusaalaha amarka
3. Waxaan kuugu soo jawaabi doonaa su'aashaada 24 saacadood gudahood.
4. ka dib diritaanka, waxaanu kula socon doonaa alaabta hal mar labadii maalmoodba mar, ilaa aad ka hesho alaabta. Markaad alaabta hesho, tijaabi, oo jawaab celin i sii. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan dhibaatada, nala soo xiriir, waxaan kuu soo bandhigi doonaa habka xalinta.
5.Sample taageerada tijaabada.
6.Beddelka cusub haddii lagu qanci waayo.
Hore: Shaandheeyaha Tuubbada Shaashada Daloolan & Baskets Beebka Daloolin ee Bir Aan Lahayn
Xiga: Birta Aan Lahayn 316 dubay silig barbecue tayo sare leh